Mambo Hezekiya Anodzivirirwa Nengirozi yaMwari | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
Umambo hweAsiriya hwakanga hwakunda umambo hwaIsraeri hwemadzinza 10. Panguva ino, Saniheribhi mambo weAsiriya, akanga ava kuda kutora umambo hweJudha hwemadzinza maviri. Akabva atanga kutora maguta eJudha, rimwe pashure perimwe. Asi Jerusarema ndiro guta raainyanya kuda kutora. Saniheribhi akanga asingazivi kuti Jehovha aidzivirira Jerusarema.
Hezekiya mambo weJudha, akapa Saniheribhi mari yakawanda chaizvo kuti arege kutora Jerusarema. Kunyange zvazvo Saniheribhi akatora mari yacho, akatumira masoja ake aiva nesimba kuti anorwisa Jerusarema. Vanhu vaiva muguta racho vakatanga kutya nekuti vaAsiriya vairamba vachiswedera pedyo neguta racho. Hezekiya akabva avaudza kuti: ‘Musatya. VaAsiriya vane simba havo asi Jehovha achaita kuti tive nesimba kutovapfuura.’
Saniheribhi akatuma Rabhisheki uyo aitaura achimumiririra, kuti aende kuJerusarema kunotsvinyira vanhu. Rabhisheki akamira kunze kweguta akabva atanga kushevedzera kuti: ‘Jehovha haagoni kukubatsirai. Musabvuma kunyengedzwa naHezekiya. Hakuna mwari anogona kukudzivirirai kuti tisakurwisai.’
Hezekiya akabvunza Jehovha kuti oita sei. Jehovha akapindura kuti: ‘Usatyisidzirwa nezvataurwa naRabhisheki. Saniheribhi haasi kuzotora Jerusarema.’ Zvadaro, Hezekiya akatambira tsamba dzaibva kuna Saniheribhi. Tsamba dzacho dzaiti: ‘Chingosarenda. Jehovha haagoni kukuponesa.’ Hezekiya akanyengetera kuti: ‘Jehovha, tinokumbirawo kuti mutiponese, kuti vanhu vese vazive kuti imi ndimi mega Mwari wechokwadi.’ Jehovha akamuudza kuti: ‘Mambo weAsiriya haasi kuzopinda muJerusarema. Ndichadzivirira guta rangu.’
Saniheribhi aifunga kuti akanga ava kuzotora Jerusarema kuti rive rake. Asi usiku ihwohwo chaihwo, Jehovha akatumira ngirozi kumusasa wemasoja eAsiriya waiva kunze kweguta. Ngirozi yacho yakauraya masoja 185 000! Mambo Saniheribhi akarasikirwa nemasoja ake ainge akasimba chaizvo. Nekukundwa kwaakanga aitwa, hapana zvaaigona kuita kunze kwekudzokera kumba. Jehovha akadzivirira Hezekiya uye guta reJerusarema, sezvaakanga avimbisa. Dai waivako kuJerusarema, ungadai wakavimba naJehovha here?
“Ngirozi yaJehovha inodzika musasa ichikomberedza vese vanomutya, uye inovanunura.”​—Pisarema 34:7
Mibvunzo: Jehovha akadzivirira sei Jerusarema? Unofunga kuti Jehovha achakudzivirirawo here?
2 Madzimambo 17:1-6; 18:13-37; 19:1-37; 2 Makoronike 32:1-23
Hezekiya Kadhi reBhaibheri
Jehovha akawedzera upenyu hwaHezekiya nemakore mangani? Dhaunirodha kadhi iri reBhaibheri uye tsvaka mhinduro yacho.
Mwari Anoporesa Hezekiya
Verenga nyaya iyi yomuBhaibheri woona kuti ingakubatsira sei kunatsiridza minyengetero yako.